बि.स.२०७४ चैत्र २८ गते बुधबार सन् २०१८ अप्रिल ११ तारिखको राशिफल हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > राशिफल > बि.स.२०७४ चैत्र २८ गते बुधबार सन् २०१८ अप्रिल ११ तारिखको राशिफल हेर्नुस्
admin April 10, 2018 राशिफल 0
बि.स.२०७४ चैत्र २८ गते बुधबार ईश्वी सन् २०१८ अप्रिल ११ तारिख नेपाल सम्बत् ११३८ बिरोधकृत् संवत्सर । उत्तरायणं । बसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४० । बैसाख कृष्णपक्ष । तिथि एकादशी अहोरात्र । नक्षत्र धनिष्ठा,४६ घडी २९ पला,बेलुकी १२ बजेर २२ मिनेट उप्रान्त शतभिषा । योग शुभ ५७ घडि ०८ पला । करण वव,बेलुका ५ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त वालव । आनन्दादिमा लुम्ब योग । चन्द्रराशि मकर,बिहान ११ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त मकर कुम्भ । धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आउने अवसरहरुको प्रयोग गरि दिगो फाईदा हुने कामहरु गर्न सकिनेछ भने आर्थिक रुपमा सुदृड हुन सकिनेछ । अध्ययनमा प्रतिष्पर्धिहरुलाई उछिन्दै चाहेको सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुने हुदा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । माया प्रेममा देखा पर्ने शंका तथा अबिश्वासलाई चिर्दै एक अर्का सँग नजिक हुने सकिनेछ । नया काम पाउने तथा नोकरिमा बढोत्तरीको गतिलो योग रहेकोछ । आफ्नै मेहनेतले राम्रा तथा परिणाम मुखि कामहरु गर्न सकिनेछ । समयको भरपुर सदुपयोग गरि नोकरि तथा व्यावसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ ।
शुभ रंग — गुलावी कार्य सिद्धि मन्त्र — ॐ सिद्धिविनायकाय नम
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वा) बिहानको समय मध्ययम रहेकोले शरिर स्वस्थ्य नहुनाले कामहरु प्रभावित हुनेछन् । कामका सवालमा बिभिन्न बिशिष्ट व्याक्तित्वहरु सँग बिवाद हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय दिएपनि आम्दानि कम हुनेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो हुनाले नया ठाउबाट कामको प्रश्ताब आउनेछ भने सामाजिक काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिलो भएर जानेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) समय मध्ययम रहेकोले दैनिक कामहरु गर्दा सजक रहनुहोला । पढाई लेखाई प्रभावित हुने योग रहेकोछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला । सरकारी काममा सेवा प्रभाव गर्नेहरुले समयमा काम नगर्दिनाले बिभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ । माया प्रेममा एका अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले केहि समयका लागि टाडिनु पर्ने हुन सक्छ । मध्यान्हपछि धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागि भई समाजको काम गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) व्यापार व्यावसायमा लगानि बडाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आकस्मिक लाभ हुने तथा बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानुका साथै भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । संकट ब्याबस्थापनका लागि चालिएका कदमबाट सार्थक नतिजा आउँने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछन् । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले कामहरु थाति राख्नुनै उत्तम हुनेछ । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
सिहं(मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) समयमानै सजक बन्नाले बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायला लगानि बढाई भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ । न्यायिक निकायबाट हुने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । कार्यक्षेत्रमा आउने समस्याहरुलाई हल गर्ने क्षमता बढ्ने हुनाले कार्यसम्पादन मुल्याङकन सुचक बढ्नेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । मामा तथा मावलि पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग तथा समर्थन पाईने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
कन्या(टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) बिहानको समय मध्ययम रहेकोले आत्मिय मित्र तथा परिवारका साथ रहेर स्वादिष्ट भोजनको टेष्ट लिने अवसर जुर्ने भएपनि खानपानको तालमेल नमिल्दा सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेमका कोपिलाहरु नचाहादा नचाहादै फक्रन नपाउँदा मनमा तनाब पैदा हुनेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले अध्ययन अध्यापनमा उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिनेछ धने बौद्धिकताको भरपुर प्रयोग मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । उपाहार प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेकोछ ।
तुला(रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) समयमा कामहरु सम्पन्न नहुदा मान तथा सम्मानमा ठेस लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । राजनिति तथा समावसेवामा जनताको आलोचना सहितको समर्थन प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउनेछ भने घर जग्गा तथा सवारि साधनको व्यावसायबाट सन्तोषजनक आम्दानि गर्न सकिनेछ । आमा तथा आफन्त सँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । माया प्रेममा एक अर्काको भावना नबुझ्दा टाडिनु पर्ने बाध्यता आउनेछ । बिद्यार्थीहरुले पढाई लेखाईमा ध्यान नदिदा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) बादबिवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ भने न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । सार्वजनिक महत्वको बिषय उठान गर्दा दाजुभाई तथा छिमेकिसँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा कामहरु समयमानै फत्ते हुनेछन् । समय तपाईकै पक्षमा रहने तथा आर्थिक व्यावस्थापनका पाटाहरु मजभुत हुँने हुँनाले जविन शैलिमा उल्लेख्य सुधार आउँनेछ । साझपख आफन्त तथा आमा सँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । सामाजिक काम गर्ने अवसर आएपनि त्यसको स्वामित्व अरुलेनै दावि गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला ।
धनु(ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) विहानको समय मध्ययम रहेकोले नया काम गर्ने अवसर आएपनि काम गर्न नजान्दा वा कामको तालमेल नमिल्दा आम्दानि कम हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्ब सँग मनमुटाब सिर्जना हुनेछ भने पारिवारिक माहोलामा जमघट भई समय व्यातित गर्न सकिएपनि खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । मध्यान्हवाट समय उत्तम रहेकोले दाजुभाई तथा छिमेकीको सहयोग पाईने योग रहेकोछ । अर्थिक अवस्था सुदृड रहनाले उत्पादन मुखि व्यावसायमा लगानि गर्न सकिनेछ । न्ययिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मकर(भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) विभिन्न अवसर प्राप्त हुने हुनाले जोस जागर बढेर आउनेछ । पढाई लेखाईमा अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक भई भावना साटासाट गर्ने अवसर जुर्नेछ । राजनिति तथा सामाजिक प्रभाव बढ्ने हुनाले मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । नियमित आय आर्जन हुने काममा समय लगानि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत नया ज्ञान सिक्ने समय रहेकोछ । समाजिक सञ्जाल तथा मिडिया मार्फत आफ्ना बिचारहरु अरु सामु लैजान सकिनेछ ।
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसाय फस्टायर जानेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि आजको दिन फलदायि रहनेछ । लामो दुरिको यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउँन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला । मध्यान्हवाट जुझारु साथिहरुको संगतले नयाँ कुराको खोज तथा अनुशन्धान गर्ने जागर आउँनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै चाहेको गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । शुभ तथा मांगलिक सभा समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ दिन कटाउँन सकिने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) चल तथा अचल पुँजी परिचालन गरि मनग्गे रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ भने पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग मार्फत धन सम्पती बढाउँन सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गरि राम्रो नतिजा हात लगाउँन सकिनेछ । प्रणय सम्बन्धको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने घर परिवारमा सबैसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुँने हुँदा ईच्छित कामनाहरु पुरा गर्न सकिनेछ । मध्यान्हवाट समय मध्ययम रहेकोले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला । खर्च बढ्ने तथा ऋण लाग्ने प्रवल सम्भावना रहेकोछ । लामो दुरिको विदेश यात्राको योगलाई नकार्न सकिदैन ।
०७६ वैशाख २६ गते बिहिवार ई. सं. २०१९ मे ०९ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो छ
०७५ चैत्र ०६ गते बुधबार ई. सं. २०१९ मार्च २० तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य